Somary misoko mangina izy eny am-piandohana ka rehefa misy tsy fahatomombanana ny fahasalaman’ny olona iray vao mety hahafantatra izy ireny fa voa. Vitsy rahateo ireo manana fandavan-tena ny hitily ity aretina iray ity, eny fa na dia ho an’ireo vehivavy mitondra vohoka aza. Raha araka ny fanazavan’ny dokotera Feziny, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny Centre Marie Stella eny Analamahitsy anefa dia tokony hitily ny aretina diabeta ao anatiny hatrany ny olona iray raha vantany vao misy tsy fahatomombanana ny fahasalamany. Hatao fahazarana kosa ilay manao fitiliana isan-taona ho an’ireo tsy dia manana olana loatra, hoy hatrany ny fanazavany hahafahana mitsabo ny aretina dieny mialoha raha toa ka misy izany. Ho an’ny lehilahy manokana dia nomarihiny fa anisan’ny antony miteraka ny aretina diabeta ny fisotroan-toaka, indrindra fa ilay mandray vera kely isaky ny mandeha iny. Ho an’ny vehivavy kosa indray dia notsindriany fa ilay tsy fanaovana fanatanjahantena no tena olana arahin’ny hatavezana vokatry ny fihinanana sakafo tsy voalanjalanja. Miantso ny rehetra tsy hanao antsirambina ny fitiliana ny aretina diabeta ity mpitsabo iray ity izay marihina fa efa hankalaza ny fahafolo taona nikatrohan’ny ivontoerana tantanany ny ady hatao amin’ny diabeta amin’ity taona 2019 ity. Mahatratra 4 % ny tahan’ireo olona voan’ny diabeta eto amintsika.